Venerable Kusalasami: July 2010
Posted by ashin kusalasami at 3:48 PM No comments:
Posted by ashin kusalasami at 12:34 PM5comments:
“အရှင်ဘုရား… ဗဟုကာမြစ်ကို ရေးသွားချိုးသလား”
“အော်…. ရေချိုးတာပဲ ဒီနားက ရေတွင်းထဲမှာ ချိုးလည်း ရတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဗဟုကာမြစ်ကို သွားချိုးရမှာလဲ”
“အော်… အရှင်ဘုရားကလည်း ဗဟုကာမြစ်ထဲမှာ အကုသိုလ်တွေကို မျောလို့ ရတယ်လေ၊ အဲဒီမှာ ရေချိုးရင် ကိလေသာတွေ စင်ကြယ်တယ်တဲ့”
“သူများတွေ ပြောတိုင်း မယုံပါနဲ့ ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားရယ်….၊ ဗဟုကာမြစ်မကလို့ အဓိကက္ကရေချိုးဆိပ်၊ ဂယာရေ ချိုးဆိပ်၊ သုန္ဒရိကာမြစ်၊ သူရဿတီမြစ်၊ ပယာဂရေချိုးဆိပ်၊ ဗဟုမတီမြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ချိုးချိုး ကိလေသာတွေ ကတော့ မစင်ကြယ်နိုင်ပါဘူး”
“ပုဏ္ဏား ရေချိုးချင်ရင် ဒီသာသနာမှာ ရေလာချိုးစမ်းပါ၊ ဒီသာသနာမှာ ရေချိုးမှ သင့်ရင်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကိလေသာတွေ စင်ကြယ်နိုင်တယ်၊ သူ့အသတ်ကို မသတ်သူဖြစ်ရင်၊ သူ့ဥစ္စာကို မခိုးသူဖြစ်ရင်၊ မနာလိုဝန်တိုမှု တွေ မရှိရင် ဂယာရေချိုးဆိပ်ကို ဘာလို့ သွားနေစရာ လိုအုံးမလဲ၊ ဟိုနားက ရေတွင်းကလည်း သင့်အတွက် ရေချိုးဆိပ်ပါပဲ”
“အရှင်ဘုရားပြောတာ သဘာဝကျလိုက်တာနော်၊ တပည့်တော် သဘောကျလိုက်တာ။ အရှင်ဘုရား အရှင် ဘုရားရဲ့ သာသနာမှာ ရေချိုးချင်ပါတယ်၊ ခွင့်ပြုပါဘုရား”
“အေး…. ငါ ခွင့်ပြုတယ်၊ ချိုးချိုး၊ ကြိုက်သလောက်ချိုး၊ ကိလေသာတွေ စင်ကြယ်တဲ့အထိ ချိုးပေတော့ ပုဏ္ဏားရေ”
မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားတို့၏ ရေချိုးခြင်းအမြင်လေးကို ကြည့်ပြီး သဘောအကျကြီး ကျနေခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အစဉ်အလာဖြစ်နေသော သို့မဟုတ် အယူတစ်ခုဖြစ်သော မြစ်ဆိပ်သွားပြီး ရေချိုးလျှင် ကိလေသာတွေ မျောလို့ရသည်ဟူသော အမြင်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိနေခဲ့သည်။ မြစ်ထဲ သွားပြီး ရေချိုး၍ ကိလေသာစင်ကြယ်သည်၊ မစင်ကြယ်သည်ဟူသော သဘောထားမှာ သူတို့ အယူအဆ၊ သူတို့ အမြင်ဖြစ်၍ မှားသည်မှန်သည် မပြောလိုသော်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဒဿနအရကား အဓိပ္ပာယ်မရှိသော အယူအဆအမြင်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က ယင်းသဘောကို အ၀တ်ဥပမာဖြင့် မိန့်တော်မူသည်။ အ၀တ်စတစ်ထည်သည် မူလက တည်းက ညစ်နွမ်းနေလျှင် မည်သည့် ဆေးကို ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ညစ်နွမ်းမှုက မပျောက်နိုင် သို့မဟုတ် ဆိုးလိုက် သည့်အရောင်သည် ပီပီပြင်ပြင် မပေါ်ထွက်လာနိုင်ပေ။ ထို့အတူပင် မိမိတို့၏ ရင်တွင်းက စင်ကြယ်မှုမရှိလျှင် နောက်ထပ် မည်သည့်စိတ်ဓာတ်အရောင်များဆိုးဆိုး မူလမစင်ကြယ်မှုက မပျောက်နိုင်ပေ။ ဖြူဖွေးစင်ကြယ် နေသောအ၀တ်တစ်ခုကိုကား မည်သည့်အရောင်များဆိုးဆိုး မိမိစိတ်ကြိုက်အရောင်ကို ရနိုင်လေသည်။
ဗုဒ္ဓစာပေတွင် လူ့စိတ်အကြောင်းကို “ဆန်းကြယ်မှု”ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သည်။ ပန်းချီတို့နှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြသည်။ ပန်းချီကားတို့တွင် တကယ့်သစ်ပင် မဟုတ်ပါဘဲလျက် တကယ့်သစ်ပင်နှင့်တူအောင်၊ တကယ့်တိမ်တိုက်မဟုတ် သော်လည်း တကယ့်တိမ်တိုက်များနှင့် မခြား လူ့စိတ်မှာ ထင်မြင်စေသည်။ ထို့အတူပင် လူ့စိတ်ကလည်း ဆန်းကြယ်လှသည်။ အဘိဓမ္မာတွင် “သဘာဝအားဖြင့် စိတ်သည် ဖြူစင်သည်၊ နောက်ပိုင်း ဆိုးလိုက်သော အရောင်များအတိုင်း ညစ်နွမ်းခြင်းများ ဖြစ်သွားရသည်”ဟု ဆိုသည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် ပကတိဖြူစင်နေသောစိတ်ကို တွေ့ရခဲသည်။ မိမိ၏ စိတ်ကလေးကိုပင် ဖြူစင်နေသော အခိုက်အတံ့ကို ရှာတွေ့ခဲသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အရောင်များ ဆိုးနေကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ ပုထုဇဉ်တို့သဘာဝအရ အချိန်နဲ့အမျှ အရောင်တစ်ခုခု မဆိုးရလျှင် မနေနိုင်ဖြစ်လေရာ သန့်စင်ကြည်လင်ပြီး မိမိသူတစ်ပါး ရှုချင်စဖွယ်အရောင်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အနီရောင်ကို ကြိုက်လို့ အနီ ရောင်ဆိုးခြင်းသည် ပြဿနာမဟုတ်သော်လည်း မိမိစိတ်တွင်တည်ကပ်နေသော အရောင်က မည်သည့် အရောင်ဖြစ်သနည်း စူးစမ်းကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိက အနီရောင်လိုချင်၍ အနီဆိုး လိုက်သော်လည်း မူလအရောင်နှင့်သဟဇာတ မဖြစ်သဖြင့် ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းသော အရောင် ဖြစ်လာ တတ်ပါသည်။
ဆရာကြီး နန္ဒာသိန်းဇံ၏ သင်တန်းများ တက်ရောက်စဉ်က Reconstructive Theory အကြောင်းကို နှစ်သက် ခဲ့ဖူးသည်။ ပြဿနာတစ်ခု၏ အဖြေ သို့မဟုတ် ဘ၀လွတ်မြောက်ရာ သီဝရီတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပြီ ဆိုလျှင် မူလအစွဲ (preperception) များနှင့် ရှေးရိုးစွဲ အယူသီးမှုများကို အရင် ဖယ်ထုတ်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှုပ်နေသောစားပွဲတစ်လုံးကို ရှင်းလင်းဖို့ရန်အတွက် ပထမဆုံး စားပွဲပေါ်ရှိ အရာအားလုံးကို ဖယ်ထုတ်လိုက်၊ ပြီးမှ တစ်ခုချင်းစီ ပြန်လည်ထားလိုက်လျှင် ရှင်းလင်းသောစားပွဲအသွင်သစ်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ လူသားအနေဖြင့် ပြဿနာ၏အဖြေတစ်ရပ်ကို စဉ်းစားကြရာတွင် များသောအားဖြင့် မူလအစွဲများကို အခြေခံပြီး အဖြေရှာတတ် ကြလေသည်။ ပြဿနာ၏ရိုက်ခတ်မှုနှင့် မူလအစွဲတို့ ပေါင်းစပ်သွားသောအခါ ရှင်းလေရှုပ်လေ ဖြစ်သွားတတ် ပါသည်။
အရာရာကို Reconstructive Theory အမြင်ဖြင့် ကြည့်တတ်ဖို့ အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ လောကရေးရာ ပြဿနာများကို သာမက ဘ၀လွတ်မြောက်ရေး တရားအားထုတ်ခြင်းကိစ္စတွင်လည်း Reconstructive Theory က အရေးကြီးပါသည်။ တရားအားမထုတ်ခင် မိမိတွင် စွဲနေသော အကောင်း၊ အဆိုး အမြင်အားလုံးကို အရင် ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ပြီးမှ မိမိ အားထုတ်မည့် တရားနည်း(တစ်ခုတည်းကို) စူးစူးစိုက်စိုက် အားထုတ် ပစ်လိုက်ဖို့ လိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့် မဟာစည်တွင် တရားထိုင်ဖူးသော ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် အခြားရိပ်သာများ (စိတ်ကို နှာသီး ဖျားတွင် ထားရသော နည်း၊ ငယ်ထိပ်တွင် ထား၍ ရှုမှတ်ရသောနည်း၊ နှလုံးအိမ်တွင် ထား၍ အားထုတ်ရ သောနည်း..စသည့်နည်းများကို အသုံးပြုသောရိပ်သာများ)တွင် သွားရောက်အားထုတ်လျှင် မူလအားထုတ်နည်း များကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပြီးမှ ဖောင်း၊ ပိန်အာရုံကို ရှုမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ မူလအခံကို မပယ်ရှားနိုင်သေးလျှင် ရောထွေးပြီး အားထုတ်၍ အဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
သို့ဖြစ်၍ ဘ၀လွတ်မြောက်ရေး တရားအားထုတ်လျှင်သော်မှ Reconstructive Theory ကို ကျင့်သုံးဖို့ လိုအပ် နေပါသည်။ တရားအားထုတ်ဖို့ အာရုံစယူလိုက်ပြီဆိုကတည်းက မိမိစိတ်တွင် လွှမ်းမိုးနေရာယူထားသော အရာ များကို အရင်ဦးဆုံး သတိကလေးဖြင့် ဂရုတစိုက် ဖယ်ရှားပေးရမည်။ ပြီးမှ ကိုယ်အားထုတ်မည့်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ရှုမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် မိမိတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀တွင်း ပြဿနာတစ်ခုခုကို ဖြေရှင်းတော့ မည်ဆိုလျှင် မိမိတို့၏ မူလအစွဲ (preperception) များကို အရင်ဦးဆုံး ဖယ်ရှားပြီးမှ စဉ်းစားသုံးသပ်ရ ပေလိမ့်မည်။ သို့မှသာ ပြဿနာ၏ဇာစ်မြစ်ကို ရှာတွေ့ပေလိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော ဇင်းဗုဒ္ဓဘာသာ (Zen Buddhism) က စတိုရီတစ်ခုမှာ မှတ်သားစရာ ကောင်း သည်။ တစ်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဆရာကြီးတစ်ဦးက ဇင်းဆရာကြီးထံသို့ ရောက်လာသည်။ ဇင်း အကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူရန် ဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခကြီး ရောက်လာသောအခါ ဇင်းဆရာကြီးက လဘက်ရည် ဖြင့် ဧည့်ခံသည်။ ပါမောက္ခကြီး လဘက်ရည်ခွက်ကို လဘက်ရည်ထည့်ပေးသောအခါ ပြည့်လျှံကျနေသည်အထိ ထည့်ပေးနေသည်။ နောက်ပိုင်း ထိုသို့ ထည့်ပေးနေသည်ကို စောင့်ကြည့်နေသော ပါမောက္ခကြီးက မနေနိုင် တော့သဖြင့် “အရှင်…ခွက်က ပြည့်နေပြီ၊ အရှင် ထည့်တာတွေ ခွက်ထဲကို မရောက်တော့ဘူး၊ လျှံကျနေပြီ”ဟု စိတ်မရှည်နိုင်စွာဖြင့် ပြောလိုက်သည်။
ထိုအခါ ဇင်းဆရာကြီးက “အေး…ဟုတ်တယ်၊ မင်းလည်းပဲ ဒီခွက်လိုပဲ၊ မင်းရင်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ကြိုတင် ယူဆထားမှုတွေက ပြည့်နေပြီ၊ ဆိုတော့ မင်းရင်ထဲကို မရှင်းလင်းထားမချင်း ဇင်းအကြောင်းတွေကို ဘယ်လိုလုပ် သင်ယူလို့ ရမလဲ”ဟု ဆိုလိုက်သည်။ အကြောင်းအရာက ထိုမျှသာ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အဖြေတစ်ခုခုကို ရ အောင် ကြိုးစားတော့မည်ဆိုလျှင် ပထမဦးဆုံး မိမိရင်ထဲတွင် သိသိသာသာဖြစ်စေ၊ မသိမသာဖြစ်စေ ကိန်းဝပ် နေသော ကြိုတင်ယူဆမှုများ သို့မဟုတ် အမှိုက်သရိုက်များကို အရင်ရှင်းလင်းထားရပေမည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားကြီးတို့ စကားအရ အိန္ဒိယတစ်ဝှမ်းတွင် ဗဟုကာမြစ် စသော မြစ်များအတွင်း ရေချိုးလျှင် ကိလေသာအညစ်အကြေးများ သို့မဟုတ် မိမိတို့ ပြုလုပ်ထားခဲ့မိသော မကောင်းမှုအကုသိုလ်များ ပျောက်ကင်းလွင့်မျောနိုင်သည်ဟူသော အယူအဆမှာ အတော်ပင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နေ သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းအယူအဆမှာ မူလအစွဲ (preperception) သို့မဟုတ် ရှေးရိုးစွဲအယူသီးမှု (Superstitious beliefs) များပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓက ယင်းအစွဲများ၊ အယူအဆများကို အရင် ဖယ်ရှားခိုင်း သည်။ ထို့နောက်မှ နှောင်းခေတ်ကဗျာဆန်ဆန် “ငါ၏ သာသနာတွင် ရေးချိုးပါလား”ဟု မိန့်သည်။
မည်ကဲ့သို့ ရေချိုးရမည်နည်း။ “သင့်ရင်ထဲမှာ သူ့အသတ်ကို သတ်ချင်တဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးဆိုတာ ရှိတယ်၊ အဲဒီအညစ်အကြေးတွေကို ကွာကျသွားအောင် ကြိုးစားလိုက်၊ သူတစ်ပါး ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို မတရားယူချင်တဲ့ အညစ်အကြေးဆိုတာ ရှိတယ်၊ အဲဒီအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ကွာကျသွားအောင် လုပ်လိုက်၊ သူတစ်ပါးတွေ ကောင်းစားနေတာကို မနာလိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေဆိုတာ ရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကိုလည်း ၀ိပဿနာဆိုတဲ့ စောင့်ကြည့်တိုက်ဖျက်ခြင်းအလုပ်နဲ့ ပြောင်သွားစင်သွားအောင် လုပ်လိုက်၊ ဒါဟာ ငါ့သာသနာမှာ ရေချိုးတာပဲ ပေါ့”။ ပုဏ္ဏားကြီးလည်း ဘုရားရှင်ပြောပြသောနည်းအတိုင်း ရေချိုးလိုက်တာ ကိလေသာအညစ်အကြေးများ ကင်းစင်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဘုရားရှင်ပေးလိုက်သောနည်းအတိုင်း ပုဏ္ဏားကြီးရေချိုးတာကို ကြည့်ပြီးသောအခါ ရင်ထဲသို့ မေးခွန်းလေးတွေ တသီတတန်းကြီး လွင့်လာသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကော ရေချိုးပြီးပြီလား။ စာဖတ်သူတွေကော ရေချိုးပြီးပြီလား။ စာဖတ်သူတို့တော့ မသိပါ။ မိမိရင်ထဲသို့ ကြည့်လိုက်သောအခါ မပြီးဆုံးနိုင်သေးသော ပုစ္ဆာများက ပွစာကျဲ နေသည်ကို စိတ်ပျက်ဖွယ် တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ပြီးမှ ဖြည့်တွေးလေးတစ်ခုက ၀င်လာသည်။ “ငါ ရေမချိုးရ သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ ရေချိုးနေတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာ တစ်ခုပဲ မဟုတ်ပါလား”။
သို့မဟုတ် အမှိုက်သရိုက်များနှင့် ပျော်မွေ့နေဆဲလား။
တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
Posted by ashin kusalasami at 9:51 AM4comments:
(တစ်လောက မဗေဒါရဲ့ ဆိုက်မှာ Burkur အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း ဆိုပြီး စာတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အံ့သြသွားတယ်။ အခု ဒီသတင်းလေးကို ဖတ်လိုက်တော့ ပိုအံ့သြသွားတယ်။ စာဖတ်သူတွေလည်း အံ့သြစရာ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေး ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါ တယ်။ မူရင်းကတော့ ဒီမှာပါ။)
ဆီးရီးယားပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အလွန်ဂယက်ရိုက်စေတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ “တက္ကသိုလ် ပရိဝုဏ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးများ ခေါင်းမြီးခြုံမ၀တ်ရ”ဆိုတဲ့ ဥပဒေပါပဲ။ ခေါင်းမြီးခြုံဆိုပေမယ့် မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပါ ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ ၀တ်စုံပါ။
ဘယ်လောက်တောင် အံ့သြစရာကောင်းသလဲ။ မလေးရှားတို့၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့လို အလယ်အလတ် သဘောထား ရှိတဲ့ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာက တကယ့်မွတ်စလင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆီးရီးယား နိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ တစ်ဖက်က အပြင်းအထန် ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုတွေနဲ့ တစ်ဖက်က အားပေးမှုတွေကြားထဲကနေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဝန်ကြီးကတော့ ပြောပါတယ်။ ဒီလို ဥပဒေထုတ်ပြီး တားမြစ်လိုက်ရတာဟာ သူတို့ဌာနတစ်ခုတည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မိဘတွေက တောင်းဆိုလို့ ထုတ်ပြန်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မိဘတွေက သူတို့ သားသမီးတွေကို “ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေရှိတဲ့ ၀န်းကျင်”မှာ ပညာသင်နေတာကို မတွေ့ချင်ကြပါဘူး။
ဒီဥပဒေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့လက ဆီးရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းက အတန်းထဲမှာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖုံးနေအောင် ခြုံရတဲ့ ခေါင်းမြီးခြုံ ၀တ်ဆင်သူ ဆရာမပေါင်း ၁၂၀၀ ကျောင်းဆရာမအဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်။ တစ်ချိန် ထဲမှာ ပညာရေးဌာနကလည်း “ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုတာ သီးသန့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်၊ အစွန်းရောက် ၀ါဒကို လက်မခံပါဘူး”လို့ ဆိုပါတယ်။ အယ်လ် အာရဘီးယား တီဗွီကလည်း “ခေါင်းမြီးခြုံကိစ္စကို အငြင်းပွား အောင်လုပ်တဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ပညာရေးမှုများနှင့် တက္ကသိုလ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆန့်ကျင်နေ တယ်”လို့ ကြေညာသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “အတွေးအမြင်အယူအဆဆိုင်ရာ ၀င်ရောက်ကျူးကျော် ခြင်း”လို့ တောင် အမည်တပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဆီးရီးယားအာဏာရ ဘာသ်ပါတီကလည်း မကြာသေးခင်က ကျင်းပသွား တဲ့ ညီလာခံမှာ ခေါင်းမြီးခြုံချွတ်ရေးကိစ္စကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချသွားပါတယ်။
ဒမက်စကတ်မြို့က ခရိုက်စစ်စ်အဖွဲ့က ပီတာဟာလင်းက “ဆီးရီးယားနိုင်ငံဟာ သီးသန့်ဆန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဓလေ့ ထုံးတမ်းများနဲ့ မွတ်စလင်ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေရဲ့ကြားမှာ ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆီးရီးယားမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံဟာ အလွန်ကို အခြေခံကျတဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်က အလွန်ကို လေးနက်ပြီး သီးသန့်ဆံတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတွေနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ အခြားတစ်ဖက်က အစ္စလာဟ်ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို မကြာခဏ အရှက်ရစေတဲ့ အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေ တဲ့နေရာမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါပဲ”လို့ သုံးသပ်ပြပါတယ်။
ဆီးရီးယားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဒီခေါင်းမြီးခြုံဝတ်ရေး၊ ချွတ်ရေးပြဿနာက “တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလာဟ် အစွန်းရောက်ပုံသဏ္ဍာန်ကို နောက်မကျခင် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြဖို့ အချိန်ကျပါပြီ” ပြောပြနေပါတယ်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနှံမှာ ကျိုးတို့ကျဲတဲ လူနည်းစု အယ်လ်ဝီတီဂိုဏ်းက အနောက်တိုင်းပုံစံ ပိုပေါက်ပါတယ်။ အဓိက လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဆွန်နီဂိုဏ်းထက် ရိုးရာအစ္စလာဟ်ဓလေ့တွေကို ကျင့်သုံးမှု သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အီရန်၊ လေဘနွန်က ဟဇ်ဘိုလာဟ်၊ ပါလက်စတိုင်းက ဟားမက်စ် လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ အကြမ်းဖက်မှုဆန်တဲ့ အလားအလာတွေ ရှိနေကြပါတယ်။
ဆီးရီးယားမှာ မွေးဖွားတဲ့ အာမေးနီးယန်းနွယ်ဖွား မာရယ်လ် ဟိုင်ဒို့ရှန်ကတော့ “ဆီးရီးယားနိုင်ငံက လူနည်းစု လောက်ကပဲ ခေါင်းမြီးခြုံချွတ်ရေးဥပဒေကို ထောက်ခံပါလိမ့်မယ်၊ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ မွတ်စလင်တွေကတော့ ဒီဥပဒေ ကို ကန့်ကွက်ကြပါလိမ့်မယ်”လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ “အမျိုးသမီးထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်တော့ ဒါဟာ အပြု သဘောဆောင်တဲ့အမြင်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ဘယ်လို နေမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝတဲ့ အမျိုးအသီးတွေကတော့ ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်၊ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီဥပဒေကို လက်ခံဖို့က အတော်ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ကျောင်းသားမိဘတွေ အနေနဲ့ သူတို့သမီးတွေကို ခေါင်းမြီးမခြုံစေဘဲ ကျောင်းသွားဖို့ ခွင့်ပြုမလား၊ ခွင့်မပြုဘူးလားဆိုတာလည်း ကျွန်တော် မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒီဥပဒေဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်မှာတော့ အသေအချာပါပဲ”လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ မွတ်စလင်အမျိုးသမီးဝတ်စုံကို လွန်ခံတဲ့ ဆယ်စုနှစ်များကတည်းက ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ သိသိသာသာ ၀တ်ဆင်လာခဲ့ကြတာပါ။ “ဒီ ခေါင်းမြီးခြုံချွတ်ထားရမယ့် အကျင့်က ရှေးရိုးစွဲ ပင်လယ်ကွေ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဆီးရီးယားအမျိုးသမီးတွေအထိ သက်ရောက်မှုရှိမလား ဆိုတာကို လေ့လာသူတွေ အငြင်းပွားနေကြဆဲပါ။
Posted by ashin kusalasami at 5:35 PM3comments:
Posted by ashin kusalasami at 9:10 AM5comments:
Posted by ashin kusalasami at 8:26 PM6comments:
Posted by ashin kusalasami at 12:21 PM5comments: